Articles by garoowe
DEG DEG+DAAWO: Deni oo Hanjabaadii ugu adkeyd uga dhawaaqay Gaalkacyo.
May 20, 2019 garoowe 5
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo maanta khudbad ka jeediyey magaalada Gaalkacyo, ayaa aad uga hadlay arrimo kusaabsan Mucaaradnimada dawladdiisa lagu hayo, Ammaanka Gaalkacyo, Mashaariicda socdo iyo sida loogu baahan yahay bulshadu in ay qeyb
DAAWO: Col. Caare oo Hanjabaadii ugu cusleyd u diray Muuse Biixi Cabdi.
DEG DEG+DAAWO: Farmaajo & Kheyre maxay ka dhaheen Dagaalka u dhaxeeya Goodax & Puntland
May 19, 2019 garoowe 0
May 18, 2019 garoowe 0
DAAWO: Puntland oo ku dhawaaqday war aan laga fileynin
DEG DEG+DAAWO: S/Land oo Bandow kusoo rogtay Laascaanood & Xaalad ka taagan.
DAAWO+SIR: Farmaajo & Xaaf ma dagaalo Sokeeye ayay ka abaabulayaan gobalka Galgaduud?
May 17, 2019 garoowe 0
DAAWO+FALANQEYN: Farmaajo oo kabaha la dulmaray D.Gobaleedyada & Wararkii u dambeeyey
May 16, 2019 garoowe 0
DAAWO: Madaxweynaha Puntland oo bilaabay qorshihii guracnaa ee lagu yaqaanay PL.
May 15, 2019 garoowe 10
DEG DEG+DAAWO: Hanjabaad deg deg ah oo soo saareen Eheladii Raggii dilka lagu xukumay ee dilay Caasho Ilyaas
May 14, 2019 garoowe 6
Ehelada ay ka soo jeedaan Sadex nin oo ay Maxkamad ku heshay in ay ahaayeen dadkii ka dambeeyey dilkii, Afduubkii iyo Kufsigii foosha xumaa ee loo gaystay Caasho Ilyaas Aden ayaa diiday xukunkii Maxkamadda, Waxayna
DAAWO: Kumanaan Banaanbaxyo ka dhiga caasumada Muqdisho “Goodax Ha dhaco Ha la cayriyo”
May 14, 2019 garoowe 0
DEG DEG+DAAWO: M/weynaha Puntland oo Afka furtay, kabahana la dulmaray DF Somalia.
May 14, 2019 garoowe 3
Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Denni oo caawa warbaahinta kula hadlay qasriga madaxtooyada Puntland ee Garoowe ayaa faahfaahin ka bixiyey shirarkii dhowaan ka dhacay Garoowe, Sababaha keenay inay fashilmaan, tallaabooyinka xiga ee la qaadi doono,